महन्थ ठाकुरले त्यो काम गर्न सक्नुभएन (अन्तरवार्ता) | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » महन्थ ठाकुरले त्यो काम गर्न सक्नुभएन (अन्तरवार्ता)
महन्थ ठाकुरले त्यो काम गर्न सक्नुभएन (अन्तरवार्ता)
SAHARA TIMES Saturday, December 1, 20180No comments
अध्यक्षमण्डलको सदस्य, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको मंसिर ४ गते बसेको अध्यक्षमण्डलको बैठकबाट महन्थ ठाकुरलाई संयोजकबाट हटाएर राजेन्द्र महतोलाई राखिएको छ । राजेन्द्र महतो अध्यक्षमण्डलको संयोजक भएपछि पार्टीमा विवाद तीब्र भएको छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाएको कार्यसमितिको नामावली बाहेक जति नियुक्ति र मनोनय भएका छन् ती सबै हटाउनुपर्छ भनि निर्णय भएको छ । त्यसले पार्टीमा झन असन्तुष्टि बढेको छ । राजपा नेपालमा किन यस्तो भयो, यसको समाधान के हो लगायतका विषयमा प्रस्तुत छ, अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादवसँग सहारा टाइम्सका लागि गरिएको कुराकानी ः
हालै राजपा नेपालले गरेको एउटा निर्णयले तरङ्ग ल्याएको छ, के त्यो छ त्यो निर्णयमा ?
–हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अध्यक्षमण्डलीय चक्रप्रणालीमा चल्ने पार्टी हो । शुरुमा हामीले महन्थ ठाकुरलाई विश्वास गरेर अध्यक्षमण्डलको संयोजकमा छाडेका थियौं तर अहिले त्यो परस्थिति नरहेको कारण चक्रप्रणाली अनुसार राजेन्द्र महतोलाई संयोजक बनाएका हौं । दुई दुई महिनामा अध्यक्षमण्डलको संयोजक फेर्ने पार्टीको नीति थियो तर पछिल्लो समय महन्थ ठाकुरले पार्टी हित विपरित काम गर्न थालेपछि उहाँलाई हटाएर राजेन्द्र महतोलाई राखेका हौं ।
महाधिवेशनको मुखमा त्यस्तो सिनियर नेतालाई यसरी हटाउन मिल्छ त ?
–राजपा नेपालको अध्यक्षमण्डलका रहेका अध्यक्षमण्डलका छजना नेता नै बराबर हुन् । त्यसमा कोही पनि सिनियर वा जुनियर छैन । यसमा सबै बराबर छन् । हामीले एउटा परस्थितिवश संयोजकमा छोडदिएको हो । हिजोसम्म ठाकुरजीलाई पार्टी चलाउनुस्, सबैलाई मिलाएर लगनुस् भनेर नै छाडेको थिए तर महन्थ ठाकुरले त्यो काम गर्नै सक्नुभएन । नेता तथा कार्यकर्तालाई मिलाएर लग्न सक्नुभएन । धर्म र जिम्मेवारीलाई छाडेर पार्टीमा जानकारी नै नदिइकन केही व्यक्तिहरु नियुक्त गर्नुभयो ।
के के नियुक्ति गर्नुभयो उहाँले ?
–पहिलो नम्बरमा उहाँले आफ्नो सम्धी उमाकान्त झालाई प्रदेश ५ को प्रदेश प्रमुख (राज्यपाल) बनाउनुभयो । त्यो पार्टीमा कही कतै निर्णय भएको छैन । हामी कसैलाई थाह पनि थिएन । भइसकेपछि सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्र थाह भयो । नीति आयोगमा पनि नियुक्ति गर्नुभयो, त्यसको बारेमा पनि कसैलाई सोध्नुभएन । हामीलाई चुनावमा जसले हराउने काम गरे, पार्टीको विरुद्धमा काम गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि उहाँले पदाधिकारीहरुमा नियुक्ति गर्नुभयो । सप्तरी क्षेत्र २ का जयप्रकाश ठाकुरले चुनावमा पार्टीको हितविपरित काम गरेको भन्दै पार्टीले कार्यवाही गरेको थियो तर अहिले उहाँलाई महन्थ ठाकुरजीले पार्टीमा फर्काउनु भएको छ । र, महामन्त्री बनाउनु भएको छ । उहाँलाई महासचिव बनाउने निर्णय कहिले भएको हो ? उहाँले कसरी बनाउनु भयो ? संयोजकको काम बैठकलाई संयोजन गर्ने हो नकि भटाभट आफ्नै मनले निर्णय गर्ने हो । उहाँले यसरी धेरैजना महासचिव, सहमहासचिव नियुक्त गर्नुभयो । यी घटनाले गर्दा पार्टीको जुन लोकप्रियता थियो त्यो घटदै गइरहेको थियो । ठाकुरजी जुन कामहरु गर्नुभयो, त्यो पार्टीको हितमा थिएन । त्यही भएर हामीले पार्टीलाई विधान त चक्रिय प्रणालीमा लगौ भनेका हौं ।
त्यसो भए महन्थ ठाकुरले पार्टीको हित विपरित काम गर्नुभएको हो भनि तपाईहरुको निष्कर्ष हो ?
–हो, यो मैले मात्र भनेको होइन । यो कुरा दुनियाँलाई थाह छ । पार्टीभित्र सबैलाई थाह छ । जनतालाई थाह छ । जुन सहमतिका आधारमा उहाँलाई संयोजक बनाइएको थियो । त्यसको उल्लघंन गर्नुभयो । विधि विधान र नीति अनुसार उहाँले चल्नु भएन बाध्य भएर हामीले चक्रिय प्रणालीलाई कायम गर्दै अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।
अपमान गरेर निकालेको कुराहरु पनि बाहिर आएको छ नि किन त्यस्तो ?
–यसलाई कसरी अपमान भन्ने हो मलाई थाह छैन । महन्थ ठाकुरले स्वयं यो निर्णय मान्नुभएको छ । निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । अनि कसरी भयो अपमान ? विधान अनुसार काम भएको हो । उहाँलाई सम्मानपूर्वक हटाइएको हो । उहाँ अहिले पनि पार्टीमा सम्मानित नेता हुनुहुन्छ । उहाँलाई हामीले सम्मान गरेर नै संयोजकमा राखेर नियमित गरेका थियौं तर उहाँले त्यो गरिमालाई बचाउन सक्नुभएन । त्यही भएर बाध्य भइ हामीले विधान अनुसार नै जाउँ भनेका हौं । त्यसमा कसैलाई कुनै अपमान गरिएको छैन ।
राजपा नेपाल फुट्ने भो त होइन ?
–किन फुट्छ, फुट्दैन । झन बलियो भएको छ । सामूहिक नेतृत्वमा जाने कुरा भएको छ । विधानलाई फ्लो गरेका हौं । यदि यो निर्णयबाट कसैलाई चित्त बुझेन भने उसले निर्णय लिनमा स्वतन्त्र छ । तर, मलाई पूर्ण विश्वास छ राजपा नेपाल फुट्दैन । किनभने राजपा नेपाल निकै मेहनतबाट स्थापना भएको पार्टी हो ।
राजेन्द्र महतोको नेतृत्वलाई महन्थ ठाकुरले स्वीकार गर्नुहुन्छ ?
–महन्थ ठाकुरलाई राजेन्द्र महतोले स्वीकार गर्ने । अनि महन्थ ठाकुरले राजेन्द्र महतोलाई किन नस्वीकार गर्ने । महन्थ ठाकुरले राजेन्द्र महतोलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ र राजकिशोर यादवलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ किनभने पार्टी सामूहिक तथा चक्रिय प्रणालीमा चलाउने सहमति भएको छ । त्यो सहमति अनुसारले सबैले सबैलाई स्वीकार गर्ने भएको छ । राजेन्द्रले महन्थलाई स्वीकार गरे जस्तै महन्थले पनि राजेन्द्रलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राजपा नेपाल एकल नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेका छन् त्यसमा के भइरहेको छ ?
–हामी चाहन्छौ कि राजपा नेपाल उकल नेतृत्वमा जाओस् । सामूहिक निर्णय र एकल नेतृत्वबाट पार्टी सञ्चालन हुनुपर्छ भनि सबभन्दा पहिले पार्टीमा कुरा उठाउने मै हुँ । एकल नेतृत्वबाट जानका लागि सबैजना चुनावबाट आउनुपर्छ । कोही पनि टिका लगाएर आउनु हुँदैन । चुनावबाट जो हुन्छ, त्यसलाई मान्ने हो । टिका प्रथा हुँदैन । अब शतप्रतिशत चुनाव हुन्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबै संगठनमा चुनाव हुन्छ ।
मधेशवादी दलमा यसरी नेतृत्वलाई लिएर पटक पटक किन विवाद हुने गरेको छ ?
–व्यक्ति व्यक्तिबीच जब टकराव हुन्छ, जब स्वार्थ मिल्दैन । स्वार्थ मिलेसम्म सबै कुरा मिलिरहेको हुन्छ नमिलेपछि टकराव शुरु हुन्छ । महन्थ ठाकुरलाई संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्छ भनि सबभन्दा बढी प्रयास मैले नै गरेको हुँ । पार्टीमा मैले नै त्यसको प्रस्ताव ल्याएको थिए । त्यसमा मेरो कुनै स्वार्थ थिएन तर त्यसको गरिमालाई उहाँले बचाउन सक्नुभएन । उहाँमा एउटा बानी छ, कुनै विषयमा कसैसँग सल्लाह गर्नुहुन्न । कसरी चल्छ पार्टी ? पार्टी भनेको सामूहिक निर्णयबाट चलाउनुपर्छ । महन्थ ठाकुर आफ्नै लागि काम गर्ने, आफ्नै जातीका लागि काम गर्ने, आफ्नै समूहका लागि काम गर्ने त्यसभन्दा माथी उठ्नै सक्नुभएन । तमलोपा गठन गर्दा महन्थजीलाई हात समातेर ल्याएका थियौं । अहिले पनि राजपा नेपाल गठन गर्नका लागि महन्थजीलाई तानेर ल्याएका हौं । राजपा नेपाल बनाउने मिसन महन्थजीको थिएन । राजपा नेपाल बनाउने मिसन मेरो थियो, त्यसपछि राजकिशोर, अनि शरतसिंह भण्डारी त्यसपछि राजेन्द्र महतोको थियो ।
त्यसो भए तपाईको विचारमा महन्थ ठाकुर राष्ट्रिय नेता बन्नसक्नु भएन ?
–राष्ट्रिय नेता बन्नका लागि राष्ट्रिय सोच बन्नुपर्छ । राष्ट्रिय चरित्र हुनुपर्छ । यो देशमा जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारु पनि छन् भने कुराको अनुभूति दिनुपर्छ । त्यो उहाँले चाहनु भएको छैन । उहाँ एकल जाती र एकल सोचबाट पार्टी चलाउनु खोज्नुभएको हो । सविधानले दिएको अधिकारलाई पनि उहाँ लागु गर्न चाहनु हुन्न ।
पार्टीका अध्यक्षमण्डलमा रहेका छजना नेताले जे भन्नुहुन्छ त्यही हुन्छ नि भन्छन् किन त्यस्तो ?
–पार्टीमा अध्यक्षमण्डलीय प्रणालीबाट चलाउने विधानमा उल्लेख छ । विधान अनुसार अध्यक्षमण्डलले निर्णय लिने गरेका हुन्छ । तर, अध्यक्षमण्डलले निर्णय लिनुभन्दा पहिले त्यसको लागि अन्यसँग पनि सल्लाह लिने गरेका हुन्छन् । राजनीतिक समिति, सचिवालयलगायतका बैठक बसेर छलफल हुन्छ अनि अध्यक्षमण्डलको बैठकबाट निर्णय हुन्छ । हाम्रो प्रयास हुन्छ कि सबै कुरा विधानसम्मत होस् ।
अनिल झा जहिले पनि नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुहुन्छ, उहाँले किन त्यस्तो गर्नुहुन्छ ?
–लेख्न दिनुस् न । त्यस्तो लेखाईले केही हुँदैन । पार्टीको मूल्यमान्यतालाई उहाँले पनि बुझ्नुपर्छ । त्यो उहाँले बुझ्नु भएन भने पार्टीलाई नोक्सान हुन्छ । त्यसैले हामीले पार्टीलाई मूल्यमान्यता, विधि विधानको आधारमा हिडाउन खोजेका छौं । त्यसमा अनिल झाले पनि साथ दिनुहुन्छ हामीलाई विश्वास छ ।
अन्त्यमा, राजपा नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन कहिले फिर्ता लिन्छ ?
–प्रधानमन्त्री ओलीले छठसम्मको समय दिनुभएको थियो । त्यो अवधिमा उहाँले काम गर्नुभएन । किन गर्नुभएन, त्यस विषयमा हामीले उहाँसँग छलफल गर्छौ । छिट्टै उहाँसँग छलफल हुन्छ । त्यसपछि हाम्रो पार्टीले आवश्यक निर्णय लिनेछ । हामीले काम गर्नका लागि उहाँलाई समर्थन दिएका थियौं । हामीले सत्ताका लागि दिएका थिएनौ । सविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई पुर्याउनका लागि हामीले समर्थन गरेका थियौं । त्यो अनुसार काम गरेन भने हामी समर्थन फिर्ता लिन बाध्य हुन्छौ । अब अन्तिमपटक वार्ता गर्दैछौ । समर्थन कायम रहने नरहने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको विवेकमा भरपर्छ ।